Faallo:-Go’doominta Al-shabaab iyo Boobka Shacabka | Radio Baidoa
Guriga Maqaallo Faallo:-Go’doominta Al-shabaab iyo Boobka Shacabka
Faallo:-Go’doominta Al-shabaab iyo Boobka Shacabka
Boqolaal Qoysas Soomaaliyeed oo isugu jira Xoola Dhaqato iyo Beeraleey ku nool qaar kamid ah goballada dalka Soomaaliya ayay go’doomiyeen kooxda Xagjirka Al Shabaab iyagoo meelaha qaar u diiday in dadka reer Miyiga ahi ay isku gudbaan.
Maalooyinka ay go’doominta Al Shabaab sida daran u saameysay Waxaa kamid Xudur iyo Waajir oo ka tirsan gobalka Bakool iyo sidoo kale magaalooyin kale oo dhaca gobalka Hiiraan ee Bartamaha Soomaaliya, iyagoo u diiday gaadiidka circa iyo kan dhulka in ay raashinka iyo waxyaabaha qutul daruuriga ah ay soo galaan magaalooyinkaasi, marka laga reebo duulimaadyada dowladda Soomaaliya ee taga deegaanadaasi oo dadka lagu gaarsiiyo waxyaabaha aas aasiga u ah nolosha Aadanaha.
Qoysaska Reer Miyiga ah ee ku nool deegaanadaasi waxaa intaa usii dheer in Al-shabaab ay kusoo rogay in ay Bixiyaan Xoolo ay ugu magac dareen Sako iyo Taakulayn xilli ay iyaguba ku jiraan xaalad adag oo dhinaca nolosha la xiriirta.
Waxaa Hoos u dhacay Wax soosaarkii Tacabka Beeraha iyo dhaqashada Xoolaha oo ay ku tiirsaneyd nolosha dad badan oo manta ay Al Shabaab ku kalifeen in ay Dawarsadaan Magaalooyinka Nabadda ah oo ay ugu horreyso Caasimadda Muqdisho.
Tani waxeey deegaanada qaar ka dhalisay in Shacabku ay qaataan Hubkooda kana hor yimaadaan Boobka Shabaab, taasoo dhalisay in goballada qaar dalka Soomaaliya ay ka abuurmaan dhallinyaro hubeysan oo lamagac baxay Macawiisleey, islamarkaan dagaallo qaraar kala horyimid damacii kooxda Xagjirka Al Shabaab.
Kooxdu iyadoo ka falcelineysa Iska Caabinta dhallinyarada is-abaabushay ayaa maalin walba gaysta Falal arxan darro ah oo ay ku cabsi galinayeen Dadka Deegaanadaasi.
Hadafka Kooxda oo ah in ay isku dhex-qariyaan dadka maatida ah ayaa ku soo dhamaaday boob, dhac, dil iyo Kufsi aysan qofna ku dhici Karin in ay bannaanka soo dhigto maadaama ay halis ku imaan karto in qofku nafta uu waayo.
Falkaan, ayaa muujinaya sida aanay Kooxda Alshabaab wax dan ah uga lahayn Shacabka Soomaaliyeed oo muddo dheer ay gabaadsanayeen,kuna noolaayeen Xoolaha ay xoogga uga qaatay, waana fariin si toos ah uga socota Bulshada isla markaana baraysa kuwa ay yihiin Alshabaab,iyadoo ay horay Bulshadu marqaati uga soo ahayd Ficillo Gumaad ah oo Alshabaab iyo xulufadoodu ugu gaysteen Bulshada Soomaaliyeed.
Tani ayaa horseedikarta Kacdoon Bulsho oo sii dhamaystira Kooxdaan oo sanadihii ugu dambeeyay aad loo wiiqay awoodoodii ciidan, balse kusii dhaqdhaqaaqaysay ku dhex kaluumaysiga Bulshada ay hadda Ciqaabayso.
Fadlan nalasoo wadaag haddii aad la kulntay Qoysas Soomaaliyeed oo ku Ceyrtoobay Boobka iyo Xaalufinta Kooxda Xagjirka Al Shabaab ay ku heyso dadka Xoola Dhaqatada iyo Beeraleyda eek u nool goballada dalka Soomaaliya.